“Barrito waxaan heysanaa hal wado oo kaliya” – Zinedine Zidane – Gool FM
(Madrid) 30 Sebt 2019. Tababaraha kooxda Real Madrid ee Zinedine Zidane ayaa ka soo muuqday shir jaraa’id kahor kulankooda 2-aad GROUP A ee tartanka Champions League ay habeen dambe ku wajihi doonaan naadiga Club Brugge.
Real Madrid ayaa habeen dambe ku soo gali doonta gudaha garoonka iyadoo raadineysa guul oo kaliya, kaddib guuldaradii lama filaanka aheyd ee ka soo gaartay kooxda PSG kulankii ay kaga daah furteen xilli ciyaareedkan tartanka Champions League, kaasoo ku soo idlaaday 3-1.
Zinedine Zidane ayaa ka hadlay waxyaabo badan oo ku saabsan kulanka habeen dambe, isagoo sharaxay muhiimada ay u leedahay kooxda Real Madrid kulankan, kaasoo ku xiran olalahooda Champions League ee xilli ciyaareedkan.
“Ciyaarta berri waa mid ka mid ah kulamada ugu muhiimsan guud ahaan xilli ciyaareedkan, barri ma dooneyno waxaan ka aheyn guul”.
“Waa inaan guuleysanaa sababtoo ah waxaan ku jirnaa booska ugu dambeeya ee group-ka, tani waa xaaladda aan haatan ku suganahay, waxaan aaminsanahay taageerayaasheena, marwalba waa kuwo xaadir ah”.
“Ramos wuxuu diyaar u yahay kulanka berri, aniga ahaan, ma jiro Sergio Ramos oo kale, waxaa jira hal Ramos oo kaliya”.
Shaxda rasmiga ah kulanka adag kooxaha Man United iyo Arsenal ee horyaalka Premier League